I-Raw S4 powder (401900-40-1) Abavelisi - Phcoker Chemical
I-S4 powder, eyaziwa nangokuthi i-Andarine, i-modorator ye-androgen receptor (SARM). I-S4 SARM ithathwa njengenye ye ..........
Amandla: 1489kg / inyanga
SKU: 401900-40-1 Udidi: Sarm Series
I-Raw S4 powder (401900-40-1) ividiyo
I-Raw S4 powder (401900-40-1) Inkcazo
S-4, eyaziwayo njenge-Andarine okanye i-GTx-007, ithathwa njengomlomo. Ikwaseklasini yezilwanyana ezibizwa ngokuba yi-SARM -i-non-steroidal yophenyo yokukhetha i-androgen receptor ene-tisti-selective androgenic ne-anabolic kwizilwanyana. Ukunyanga kweemeko ezinjenge-muscle ukuchitha, i-osteoporosis kunye ne-benign prostatic hypertrophy. Akuncinci kumabini ama-anabolic kunye neziphumo ze-androgenic kunezinye ii-SARM. Namhlanje, isetyenziswa ngokuqhelekileyo kwaye ithengiswa njengemichiza yocwaningo, esetyenziswa ngabadlali abafuna ukufumana onke amancedo amandla kunye nokuzuza kwemisipha engenayo ngaphandle kwemiphumo emibi echaphazelekayo eyenziwa nge-anabolic steroids. Ngaphezulu, i-Raw S4 powder isetyenziswe njengenxalenye yesitebe se-steroid ukuphucula umjikelezo ngaphandle kokongeza imiphumo emibi, okanye i-orromatization.
I-Raw S4 powder (401900-40-1) Suqobo
Igama lemveliso I-Raw S4 powder
Igama leKhemikhali I-Andarine, i-GTX-007, i-UNII-7UT2HAH49H, i-7UT2HAH49H, i-AK-41009, i-SARM I-4, i-Andarine-i-GTX-007, (i-2S) -3- (i-4-i-Acetamidophenoxy) -2-hydroxy-2-methyl-N- [ 4-nitro-3- (trifluoromethyl) phenyl] propanamide
uhlobo Numama Andarine
Iqela leziyobisi SARMS, Inhibitors
Inani leCAS 401900-40-1
IMasaisotopic Mass 441.115 g / mol
Ukuxuba Point 70-74 ℃
Fukuhlaziywa kwakhona Point 152 ° C
I-Biological Half-Life Ngaphantsi kwe7hours
umbala Pale Yellow Solid
Sukufaneleka Enyibilikayo DMSO (85 mg / ml), Amanzi (<1.2 mg / ml), kunye Ethanol (85 mg / ml), oku kwakhona soluable e Propylene ethers kunye PEG400.
Sisibetho Tukushisa I-3 iminyaka kwi-20 ° C
I-Raw S4 powder Aukuguquka Iipilisi zamapayipi ze-S4 / iifomsile zokuCima, Ukubuyisela kwakhona, ukuHlonipha, ukuHlonipha kunye nokuPhumelela koMbane (ngaphandle kwe-bloating)
Umxobhozo omninzi we-S4 powder (401900-40-1)
I-S4 SARM isetyenziselwa yonke into eninzi. Ukunquma, ukukhwaza okanye ukubuyisela akukho nto kunye nale modulator ye-androgen ye-receptor.
Kwinqumle, unokulindela ukuba kukunceda uzinzile kunye neengcambu. Kuyaziwa ukwandisa amandla kunye nobunzima nangona udla iikhalori ezimbalwa.
Ngokombono wam, i-S4 SARM i-powder eluhlaza ikhanya ngokukhawuleza xa kubetha.
Ngeveki okanye ezimbini uya kuqala ukufumana amandla amaninzi kunye nobukhulu. Kwanqanaba eliphantsi le-50mg.
Kwaye into enkulu kukuba le SARM ithathwa njengento ecocekileyo. Awuyi kubakho ukugcinwa kwamanzi okanye ukutywala ngexesha lobuninzi.
Ngokuqinisekileyo kungokwamanye ama-SARM anamandla. Andiqinisekanga engqondweni yam ukuba mhlawumbi unamandla kune LGD4033.
I-Raw S4 powder (401900-40-1) Indlela yokusebenza
Kanye nazo zonke ezinye izidakamizwa ze-SARM, i-S4 powder eluhlaza isebenza ngokuxuba kuma-receptors. Lo msebenzi ufana nendlela i-steroids isebenza ngayo. Ukwahlukana kuphela kukuba akubandakanyi nemiphumo emibi kunye neempembelelo ezinxulumene nokusebenzisa i-steroids. I-S4 icwangciswa ukuba idibanise ngokukodwa kwimandla, ukusebenza, kunye nokwakhiwa kwemisipha.
Ukusebenza kwe-S4 powder eluhlaza kumzimba ukhetha. Oku kuthetha ukuba ukhetha izicubu ezifuna ukusebenzisana kunye nokuphucula izicubu ezininzi ngexesha liqinisekisa ukuba ezinye iinxalenye zomzimba azilimazi.
Ingenza imisipha yakho ibe nzima, i-vascular and dry right from week-1 ukuya phambili. Ngandlela-thile ufana neWinstrol, nje kuphela.
Ukongeza kule nto, idala indawo epheleleyo ye-anabolic emzimbeni evumela ezinye iimveliso ukuba zikhabe.
I-S4 powder eluhlaza yayiphezu kwendawo. Abantu babeyongeza kwiisitaki zokusika, iisitaki zokubhukuda, iinkqubo zokuvuselela umzimba.
Kwaye kwaza kwafika iingxelo zengxowankulu yeempembelelo zombono oqale ukukwenza imijikelezo.
Ekuqaleni iingxelo zazikuqala ngokubona imibala engafanelekanga kunye ne-yellow tinge kwizinto. Uhlobo olufana nokubona i-Sepia.
Kodwa xa iingxelo malunga nobupumputhe bendawo ziqala ukuhlaselwa, i-S4 yaba yi-bête-black of lovers SARMS.
Kuninzi ke, loo ntengiso yayingena kwi-zero. Akukho mntu ufuna ukuphazamisa nombono wabo emva koko.
benefits I-Raw S4 powder (401900-40-1)
I-S4 isetyenziselwa ukusika, ukuxubha nokubuyisela kwakhona.
usebenzisa i-S4 powder eluhlaza yandisa i-oxidation ye-fat emzimbeni kwaye inciphisa i-lipoprotein lipase emzimbeni. I-S4 iqinisekisa ukuba umzimba awulahlekelwa ubunzima be-muscle ngexesha lokulahleka kwekhalori. Umjikelezo wokusika uthatha malunga neveki ze-12.
Kanye njengoko igama libhekisela, ukukhwabanisa kuthetha amandla ngaphandle kokungabikho kwamandla emveliso kunye nokugcinwa kwamanzi. Impembelelo yokubamba i-S4 ayisoloko ikhetheke kakhulu, kodwa iqinisekisa ukuba umzimba awulahlekelwa yiphina amandla aqokelelwe kulo lonke umjikelezo.
Le yinkqubo yokubetha umzimba weenqatha kunye nokwandisa ubunzima besisundu ngexesha elifanayo. I-S4 ikhuthaza ukuxhamla umzimba kunye nokunyusa ukusebenza komzimba.
I-Rax S4 ephakanyisiweyo (401900-40-1) Isisombululo
I-S4 ifana nenguqu enamandla yeWinstrol. Yomelele kakhulu kumayeza aphantsi a-25 ukuya ku-50mg. Naphezu kokuba i-SARM elula, inene ngokwenene.
I-LGD4033 powder emfutshane (1165910-22-4)
Idatha yezesayensi esiyifumane kwi-LGD4033 powder ngokuqinisekileyo ibonisa ubungqina obuninzi bokuthi sinakho ......
I-Rax SR9009 powder (1379686-30-2)
I-Rax SR9009 powder ibizwa ngokuqhelekileyo njenge-Stenabolic kwaye ngokuyisiseko isichengiselwano esilungelelweyo ngenjongo ye ......
Amandla: 1240kg / inyanga